SomaliTalk.com » Shiikh Shakuul: Aan garteena kala goosanee gogol inoo xaar!
Daabaco | Print | Faafin: SomaliTalk.com: Saturday, January 12, 2013 // 16 Jawaabood
Wixii Qoran baa Quruuma haree muxuu Hadal Qiimaleeyahay
Waxaa yiri Abwaan Soomaaliyeed
Waraysigan oo dheeraa qofkii rabaa wuxuu ka heli karaa linkigan (ka bilow daqiiqadda 47:00)
Jawaabtii Sh. Shakuul: Aan Garteena kala goosane gartaada ma qaadan?
16 Jawaabood " Shiikh Shakuul: Aan garteena kala goosanee gogol inoo xaar! "
Wednesday, January 30, 2013 at 5:40 am
yaasiin garaad aad iyo aad ayuu umahadsan yahay
gartuna labo nin kama wada qosliso
arinta yaasiin kuhaysto shakuul maahan arin ugahareysa hadalada uu asagu uhadlay ama kuwa difaacayaa kuhadleen sida: wiilkan yar , nin dhalintayan , iyo sufahada iyo tadrufka uu jawaabtiisa kusheegey wadaadku
wadaadbaan ahay kaama reebeyso dambiga aad leedahay hadynan kuu kurdhin sida yaasiinba yirina qab-qablayaashii dagaalka hadalkaan kadiidney nin diinsheekaganaya lagaga aamusi maayo mahadsanidiin
Ina Xaraash says:
Rageedii yusuf sxb anoo kasoo jeeda beesha sheekha aad baan ugu farxay sida ficilka leh ee ku difaacday xaqa dhulka iyo umada muslimiinta kuna karbaashtay duliga fuleyga danestaha caadifada iyo damiirkaba ka tagay, kuwa badan oo soomaali asoo kalaa jira lkn kuwa caqliga leh hadalsda noocaa ah ee keydka taariiqda galaya public kuma dhahaan….
Monday, January 28, 2013 at 10:27 am
Aad ayuu u mahadsanyahay qoraaga qoray maqaalkaan.
Runtii waxaan aad uga xumahay in somaalidii uu qabiilka ka gaaray heer eey cadaw isu soo wataan! Jubba Land dadkeeda haka taliyaan lkn ma aha in Ktnya iyo Ethopia xaqbey u leeyihiin iney maamul usameeyaan la dhaho dowladii soomaaliyeedna la dhaho shaqa kuma laho! Taa waxaa dhaantay in la dhaho Puntland ayaa maamul noo sameyneyso (waa haddii ay dadka jubooyinka isku waafaqaan), lkn in Kenya oo xoola dhaqatadii ka faka waayeen umadiina laysay bal arintaas ay qireen ciidankii la socday ee Jubbooyinka aan dhahno ayagaa maamul noo sameynayo dowladdana shaqa kuma laha waa qalad! Suaashuna waxa waaye Kismayo halkey ka tirsantahay? Kenya ama Somaliya?
Saturday, January 26, 2013 at 5:51 pm
Asc marki an arkay qoraalka yasin ma aanan aqrin markise jawaabta shakuul timid ayaan dareemay in qoraalku xiiso leeyahay, aad ayaana ugu mahadcelinayaa yaaska waxaana ka codsanayaa soomalidu in ay wax kaydiyaan si berito dadka loogu dhex dhuuman,qoraaga maqaalka mar kale ayaan u mahadcelinayaa, dadka raba in ay difaacaan shakuul waxan u soo jeedinayaa mar hadii uusan qareen idiin dooran in aad sugtaan jawaabta shakuul ka bixiyo qoraalkan mahadsanidiin…
maxamed garbo says:
Sunday, January 20, 2013 at 12:29 pm
asc sxb waad ku mahadsntahay dadaalka aad bixisay lakin dariiqii islamku u sameyey maadan marin ee nasixada noocan ah looma baahno sxb takale adaaba dadaal iyo wanaag u qiray shekha ee sunada waxaa ku xusan waxaa jana gala nin ceebtiisu ka mashquulisay ceebaha dadka kale ee raaali galin bixi dibna ugu laabo axaadista aad soo daliishatay macnahooda dhabta ah mahadsanid cafwan sxb.
Mohamed Garaad says:
Sunday, January 20, 2013 at 11:45 am
Waxaad moodaa in yarku boodh isku qarinayo, oo uu Sheikh Shakuul mansabka u diidanyahay! Sababta anigu waan fahmi karaa waxaana u fahmay in yarku ka soo jeedo beel diidan arrimaha ka socda jubooyinka. Waliba beelihii qoriga ku tagay ama is abaabulka!
La yaab malaha in nin kasta uu maanta qalinka reerkiina ku badbaadi isyiraahdo, kadibna wax yaabo tiro badan ku maxaabto ama boodh isku qariyo!
Hal arrin ah oo uu been ku sheegay innanku ayaan idiin cadeyn e waa ‘shakuul waxa uu iyiri Qabridaharre ayaan ku barbaaray’ Arintaa uu yarku sheegey waxa ay u muuqataa mid been ah qoyska uu shakuul ka soo jeedo waa ninam Badhaadhe daga hadii laga tagi waayo dhulka Ogaden waxa ay ka dagaan Wardheer, marka mala’awaal iyo USA ayaan ku wada nooleyn un.
Asgaa dood la wadaag horta mar kaad ka soo gudubtana odayaasha dhageyso inta aadan la doodin!
Sunday, January 20, 2013 at 8:19 am
Marka laga tago ra’yiga shakhsiga ah ee uu qof ama koox ka qabto arinta Jubbooyinka waxaa muhiim ah in soomaali kastaaka fekero:
1. Kismayo waa gobol ka mid ah soomaaliya waxaana xukuma oo loo doortay Madaxwayne Xassan Sheekh iyo dawladdisa. Wixii intaa ka baxsan waa boob lagu hayo dhulkii soomaaliyeed garo ama ha garan.
2. Haddii cidi gardarro ku qaadanayso Kismaayo Amxaaro iyo Kikuya waxaa oga xaq badan Hawiye oo Soomaali ah .. garawso ama haka garawsan.. haddii aad hadda garanwaydidna mar dambe ayaad garan.
3. Sida ugu fiicani waa in dadka degan Kismaayo ama Jubbooyinku tashadaan – Laakiin waxaa shardi ah inay dhawraan midnimada iyo qaranimada dalkooda – Soomaali walbana xaq buu ku leeyahay Jubbooyinka.
Abdi garaad says:
Thursday, January 17, 2013 at 10:50 pm
Yaasiin, Aad baad u dadaashay sida aad wax isugu keentay. Balse maanta waxaan u baahannahay dad wax qabta sida Sheekh Shakuul oo kale. Waxaa waqtigaagu ku fiicnaan lahaa in aad ku bixisid sidii aad mashruuc ugu hirgelin lahayd da’ yarta somaliyeed ee kula jooga Minnesota iyo meelaha la midka ah. Waqtiyadu way isbadalaan, danta Somaliyeedna rag uu Shakuul ka mid yahay baa marwalba u taagan. Haddaad adigu ka xun tahay xaalka jira, rag badan baa kaaga xanuun badan marxaladda eegga jirta, mar walbana u taagan danta Somaliyeed si ay ku gaaraanna meelo badan u maray. In aad dowladaha dariska darisnimadooda wanaajisidna dambi ma aha ee saa oola soco.Tusaale yar aan ku siiyee, qaar kula mid ah baa adiga laftigaaga kugu yiri maraykan ha aadan waa dal gaalee, haddana laga yaabo in ay adiga laftigaa kuu arkaan nin dhumay oo dhul gaalo aaday. Marka maskaxdu way kortaa taaduna way kori doontaa, waqtigeeda sugo. Waxaa iga talo ah in aad waqtigaaga uga faa’iideysatid in aad naftaada waxyaalaha ka qaldan sida aad uga sixi lahayd ku mashquushid…….Mahadsanid
Aden Abdullahi says:
Wednesday, January 16, 2013 at 7:41 am
Waxaa la yiri, haddaad aragto qof calooshu ka soo jeeddo gar hasiin, waayo, waxaa laga yaabaa in kii caloosha ka soo riday uu dilayba. Sidaas darteed, waxaan jeclaan lahaa in la arko jawaabta Sheekhu ka bixiyo.
Tuesday, January 15, 2013 at 1:12 am
Waxay soomaalidu tiraahdaa ” carab dalab leh cagtii dalab leh laga garan og…..
Faaladani waxay ila tahay mid isku dhererin & xaalad abuur iyo halagaa sheego ah,,, nasteexadu dariiq bay leedahay, wax is ´weydiintuna dariiq bay leedahay….waxan méesha ku qorani waa war dariiqiisii ka lumay…runimadiisa iýo run la’aantiisa Alle ayaa ku caalim ah.
Monday, January 14, 2013 at 2:45 pm
asc sln kadib waxaan uga mahad celinayaa qoraaga sida wacan ee uu xaqa u cadeeyay waxaana leeyahay jazaaka allaah
Cirro Ismaaciil Xaashi says:
ASC. dhammaan walaalaha, aniga way ila qummantahay in la is waaniyo, wax ka isu sheego, dhammaanteenna waxaan nahay gafayaal, balse soo ma fiicna inta aadan faafin in aad isaga gaar ahaan ugu dirtid?
Monday, January 14, 2013 at 10:17 am
yaasiin runta ayuu sheegay waa wadani run ah aad iyo aad ayuu u mahadsan yahay
Monday, January 14, 2013 at 2:51 am
waar niinyahow sheekha maataqaniid, waaxad sheegaysiis oo dhaan waax saal iyo raad leh maahee ummada somaliyeed waaxad oo soo gudbisee dambigoodha adhaa leeh oo illahay ka yaab
Khalif Gesod says:
Sunday, January 13, 2013 at 7:24 am
Waa gar loo baahan yahay in Sheekhu ka garbaxo, Soomaali oo dhan ayaana leh.
Aniga waxaan ka mid ahay dadka dagaalkii 77ka ku waayey walaalo qaali ah, marka aan maqlo ama arko dad u dhashay Somali galbeed oo maanta Itoobiya amaanaya aad ayaan uga xumaada.sida kale qormo xiiso leh och si fiican u qoran, mahadanidin
Diriye Dhuub says:
Sunday, January 13, 2013 at 2:32 am
Todobo nooc oo raggu u kala baxo ayaa waxaa ka mid ahaa ..nin rag ah, nin rag ah kaal, rife, iyo rife kaal….
Somalidu weligeed baran mayso in qofku aragtidiisa leeyahay gaarna ay u tahay, laguna ixtiraamo.
caadifad iyo dareen aan qarsoomi karin oo loo hayo koox gaar ah ama qabiil gaar ah yaan cidna loo xagxagan